भगवानका प्रिय व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यी अक्षर,तपाईको हातमा पनि छ की? |
भगवानका प्रिय व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यी अक्षर,तपाईको हातमा पनि छ की?
February 16, 2022 February 16, 2022 adminLeaveaComment on भगवानका प्रिय व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यी अक्षर,तपाईको हातमा पनि छ की?
काठमाडौँ । हातको रेखामा यस्ता कति शब्द लुकेका हुन्छन् जसको अर्थ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर यसको महत्व बहुतै अधिक हुन्छ ।तपाईले टिभी अथवा फिल्ममा त देख्नुभएकै होला कि उनीहरुको हात हेरेर मिल्नेवाला पतिको भविष्य बताइन्छ। वा हातमा कुनै यस्तो रेखा हुन्छ जो हामीलाई कुनै अक्षरमा दिखाइ दिन्छ।हातको रेखामा बनेको अक्षरको पनि विभिन्न अर्थ हुन्छ। आउनुहोस् हामी तपाईलाई बताउँछौ कि तपाईको हातमा अङ्ग्रजी अल्फाबेट बनेको छ भने यसले तपाईको किस्मतमा के असर पर्दछ त ?
जुन मानिसको हातमा यो (M) अल्फाबेट (वर्णमाला)को अक्षर अंकित हुन्छ त्यस व्यक्तिको सहजबुद्धि बहुत नै तेज हुन्छ। साथमा यस्ता व्यक्ति कुनै पनि व्यवसायमा सबैभन्दा राम्रो पार्टनरको रुपमा साबित हुन्छन्।यदि तपाई यस्तो व्यक्तिसँग प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाई कहिल्यै पनि झुठो कुरा गर्न सक्नुहुन्न, उनीसँग ठट्टा गर्नसक्नुहुन्न किनभने यिनीहरुको “सिक्स सेन्स” एकदम तेज हुन्छ। तिनीहरूले कुनै पनि झूट सजिलै सँग समात्छन्।
स्त्री वा पुरुष यी दुवै मध्ये कुनै पनि व्यक्तिको हातमा यो अक्षर अंकित गरेको छ भने तिनीहरू एक अर्काको लागि राम्रो पार्टनर हुन्छन्। ती दुबैको वैवाहिक जीवन खुशी रहन्छ।त्यस्ता व्यक्ति परिवर्तनबाट डराउँदैनन् र जीवनमा सबै किसिमका चुनौतीहरू स्वीकार्न पनि पछि हट्दैनन्।
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य।प्रति तोला यति थोरैमा कारोबार हुदै?
अब दिल्लीदेखि लण्डनसम्म बसमा यात्रा:विश्वकै सबैभन्दा लामो यात्रामा १८ देशको भ्रमण,भाडा २४ लाख लाग्ने
हरेक महिलाले एकचोटी अ:बस्य पढ्नै पर्ने मनछुने कथा…हेर्नुहोस
अहिलेसम्म फसेका पैसा र धनसम्पत्ति वृद्धिका लागी गर्नुहोस यो उपाय,बनाउनेछैन निरास